मेरो गाँउ, मेरो ठाँउ Archives - Page3of3- Purbeli News
दीपावलीमा झकिझकाउ र हरियाली बन्दै राजविराज
सप्तरी । हिन्दुहरुको महत्वपूर्ण पर्व दीपावली धुमधामका साथ मनाउने तयारी गरिएको छ । दीपावलीको अवसरमा घर, पसल तथा व्यवपारी प्रतिष्ठानहरुमा बिद्युतीय बत्ती जडान गरी राजविराजलाई झिलीमिली बनाउन थालिएको हो । घर पसल उज्यालो बनाउन माटोको दियो, मैनबत्ती र सजाउन फुल किन्नेहरुको पनि बजारमा भिड उस्तै छ । यस्तै घर, पसल तथा व्यापारी प्रतिष्ठानको प्रवेशद्वारमा ...
पाँचखपन / पाँचखपन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको निजी खर्चमा सडक मर्मत भएपछी बस सेवा सञ्चालन भएको छ । नगरपालिकाका मेयर विपिन राई र वडा नं. १ का अध्यक्ष टेक बहादुर बुढाथोकीको संयुक्त खर्चमा सडक मर्मत भएपछी बस सञ्चालनमा आएको हाे । वर्षायाम लागेसंगै गत असार १५ देखि ठूला तथा साना सवारी साधन आवत जावत बन्द भएको थियो । हेवाँ खोलामा पक्की पुल नहुँदा सवार...
सुनरीकाे बलाहामा थारू कल्याणकारी सभा (थाकस) काे झन्डा फहराइएकाे छ । थारु युवा समाज इनरुवा बलाहा सुनसरीका अध्यक्ष रोहित चौधरीको नेतृत्वमा थाकस काे झन्डा फहराइएकाे हाे । वि.सं. २०७२/२०७३ काे थरुहट आन्दोलनमा थारु युवा, महिला, बुद्दीजिवि तथा थारु अगुवा नेताहरुले थाकसकाे झन्डा पहराएकाे थियाे । थारूहरूकाे महान चाँड गाेठालेकाे अवसरमा सुन्सरीको बलाहामा...
खोटाङ / कुमाल समुदायको पुख्र्यौली पेशा (माटोको भाँडा बनाउने) सङ्कटमा पर्दै गएको छ । पछिल्लो समय हाटबजारमा आधुनिक प्रविधिका भाँडाहरु सुपत मूल्यमा प्रशस्त पाउन थालेसँगै कुमाल समुदायको पुख्र्यौली पेशा सङ्कटमा परेकोे हो । जिल्लाको एक मात्र ठाउँ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४ खाल्लेमा बन्ने माटोको भाँडाहरु पहिलेको तुलनामा कम बिक्री हुने गरेको यो प...
स्याङ्जा / पर्यटन वर्षको चर्चा चलिरहेको बेला जिल्लास्थित घुरुङखाँ मैदान गाउँका स्थानीय बासिन्दा पर्यटकको पर्खाइमा छन् । जिल्लाको पश्चिमी भेगमा पर्ने वालिङ नगरपालिका–१२ सिर्सेकोटस्थित घुरुङखाँ मैदान गाउँका बासिन्दा पर्यटकलाई स्वागत गर्न आतुर रहेका छन् । पर्यटकका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको निर्माण गरेर गाउँमा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई आफ्...